sawehlor: Desktop Camstudio Software - မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)
. Friday,9December 2011
Source : မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)
ကျွန်တော် အရင်းက ကိုယ့် Computer ကို Screen ပြန်ရိုက်တဲ့ Software ကို တစ်ခါတင်ပြပေးဖူးပါတယ်။ အရင်းတင်ပြခဲ့တဲ့ Software က အခု Software လောက် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ဒီ Software ကတော့ အတော် အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒါလေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။အရမ်းအသေးစိတ်တော့ မရေးပေးတော့ပါဘူး။
1. အရင် CamStudio Software ကို Drownload ချပြီ Run လိုက်ပါ။
Download ZippyshareDownload Mediafire
2. Software ကို Run ပြီတာနဲ့ Desktop ပေါ်က CamStudio Short Cut ကို click လိုက်ရင်အောက်ပါ အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Region ကနေ မိမိက Screen ကို ဘယ်လိုရိုက်မှာလဲ ဆိုတာကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Full Screen ကိုဘဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
3. ပြီရင်အောက်မှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ အနီရောက်ကို click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စတင် Desktop ကို Scan လုပ်နေပါပြီ။ ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်လဲ လေးထောင့်ကွက်အပြာရောင်လေးကို ပိတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ကျွန်တော် ဒီလောက်ဘဲရှင်းပြပါမည်.ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာလိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။(Save တာတော့ မရေးတော့ဘူးနော် )
27th SEA GAMES LIVE MYANMAR 2013
All Burmese fonts
Android Phone/Tablet ကို Root မလုပ်ချင်သူတွေအတွက်
Calculator (Android OS)
Camera Ebooks Collection
Firefox နှင့် Chrome တွင်မြန်မာဖောင့်မြင်ရန်
Flash Song ပြုလုပ်နည်း
Google Chrome မှာမြန်မာလိုဖတ်လို့ရအောင်
Hardware ပိုင်းများကိုတစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာနိုင်ရန်
HJSplit ဖြင့် ဖိုင်ဖြေနည်း
How to download from Google Play Apps
HTC မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် root လုပ်တဲ့နည်း
IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း
iPod တွေကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာစာပေါ်အောင်
Mcrosoft Office 2010
Myanmar Bible For Android Phone/Tablet
Myanmar Bible for Iphone
Myanmar Bible for PC
Myanmar Mobile App Market for Android
Samsung Galaxy S/S2/ Tab Tablet တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်မြင်ရအောင်လုပ်နည်း
Samsung Galaxy Series တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း(နေမင်းမောင်)
Smart Stay for Android
Speed Up Your Window
TFTTEST for to check screen
TORRENT FILE တွေကိုဘယ်လို DOWNLOAD လုပ်မလဲ
USB/Menory Card write protected
Windows အသစ်တင်ပြီးရင်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် Back Up and Restore Point
YouTube Downloader For Android Phone/tablet
Zawgyi Keyboard Installer for Windows7_ 8 (64-bit)
ကွန်ပျူ တာ မြန်အောင်ပြုလုပ်နည်း
ဓါတ်ပုံမှရုပ်ရှင်သို့ပြောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်ဗီစီဒီတစ်ချပ်ရအောင်
မြန်မာ Mobile App Viewer for Android
မိတ်ဆွေတို့ PC မှာ Electronic Circuit Diagram တွေဆွဲပြီးလေ့ကျင့်လိုရတဲ့ Ideal Circuit Software လေးပါ။
TeamViewer Premium.10.0.43879 + Crack Full Version
အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ ရန်ကုန်မှ နေပြည်တော်သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၃ ဒေါ်လာဖြင့် လေယာဉ် စီးနိုင်မည် ….
iOS unjailBreak ပြုလုပ်ခြင်း Video
၃၈ ဖွာမင်ျဂလာတရားတျော...apk လေးပါနျော..
YOYARLAY - ပင်မစာမျက်နှာ
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ)ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Tips Mempercepat Lock GPS
Windows7, 8 အသုံးပြု နည်း
Myanmar Bible for iPhone, iPad
KWEG မှ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် လူထုအသိပညာပေး ဆရာဖြစ်သင်တန်းပို့ချ
Dream spoken word
Sky Force 2014 APK+Data Full Version
MMDhammaPaDa (မြန်မာ ဓမ္မပဒ) iOS App
Viber 4.2 update for android
Website ရေးနည်း အပိုင်း (၄ + ၅) – html5 and css3
Free Download Revo Uninstaller Pro 3.0.1 Portable
Computer မှာ Memory နည်းနေရင် Flash Drive (သို့) SD Card ကနေတိုးနည်း။
Ayar Myanmar Unicode Group
Live Live Sports
sawehlor Android APK
All Kaspersky Keys
Auto CAD 2010 64bit
Activation Auto CAD 2010
Activation Auto CAD 2011
All AVG Key
DreamweaverDVD CreatorDVD Ripper
Font for Androed-OS
Internet- I D M
AVG InternetSecurity 2013
Myanmar3Font
Password Unlocker All
Shortcut virus Skype v-chat
Screen Shot A-S-poo Snap
Wifi to Phone
ဒီမိုကရက်တစ်ရုပ်/သံ ဗွီအိုအေမြန်မာရုပ်/သံ အင်တာနက်မှဓါတ်ပုံပြင်
Burmese Classic Burma News Freedom News Group
မိုးမခ မဇ္ဈိမ ဧရာဝတီ ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ ဒီမိုကရက်တစ်
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ကရင်သတင်းစဉ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် ခိုနုန်းထုန်သတင်းဌာန လွတ်လပ်သောမွန်
ကိုးဒီသွေး အကြည့်များသော Posts
Zawgyi-font Zawgyi Keyboard 64bit Run Setup ZawgyiFont and Zawyi Keyboard 64bit Run Setup For Firefox မြန်မာလက်ကွက်လေ့ကျင့်ရန် ဆော့ဝဲ - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
ကဲ ညီလေးရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ရိုက်လို့ရပါတယ် . မြန်မာလို ရိုက်လို့ရတဲ့ software တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးကို ...
ဗေဒင် The Lady ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
သည်အမျိုးသမီး(မြန်မာစာတမ်းထိုး) from thanhtut on Vimeo . ZawgyiFont for iOS 8 to 8.3
ပုံကိုကလစ်ပြီး Apple store shortcut တွေ ပုံစံတူလိုက်ပွားနေတဲ့(folder, .exe) virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ.
စိုင်းစိုးလှိုင် : မင်္ဂလာပါ ကိုညီ . ကျွန်တော်က ကိုညီနေမင်း သင်ပေးနေတဲ့ နည်းပညာတွေကို ခံယူနေတဲ့ ညီငယ်ပါ။ အခု ကျွန်တော့်စက်က ပြသနာတက်နေလိ...
Samsung Galaxy Ace / W / Y / Note / S / SII, III, IV, V တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း(နေမင်းမောင်)
ကျွန်တော် အခု Samsung Glaxy Ace မှာ Root လုပ်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြန်ပြီးတော့ ရှယ်ပေးသွားပါမယ် .. Myanmar Mo...
ဒီမှာ သွားလိုက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
My Happy Games Flash Games ဘောလုံးပွဲ(LIVE)
Word 2010 အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) - ညီနေမင်း(နည်းပ...
စက်မှုဆိုင်ရာလက်စွဲ စာအုပ် - စင်္ကာံပူရောက်မြန်မာများ...
Desktop Camstudio Software - မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)...
Desktop Gadgets Error ကိုဖြေရှင်းရန် - နေမင်းမောင်...